Ireo boky siansa tsara indrindra
Amin'ny ora sy rano, nataon'i Andri Snaer Magnason
Ilaina ny miatrika fomba hafa hipetrahana ity planeta ity, tsy misy isalasalana. Ny diantsika manerana an'izao tontolo izao dia voamarik'ireo marika famantarana toy ny marika satria tsy mitombina izy ireo raha mandinika ny fitovian'ny androntsika amin'ny cosmos. Ka tsy misy dikany ary afaka manova ny zava-drehetra. Ho tafavoaka velona ny tany ka ho ...
Dian-tongotra: eo am-pikarohana an'izao tontolo izao dia hiala ao aoriany isika, nataon'i David Farrier
Ahoana no hahitan'izy ireo antsika amin'ny ho avy? Raha lazaina amin'ny teny hafa dia resaka fakana sary an-tsaina ny zatovo iray amin'ny taona 3024, na inona na inona karazana izy, eo alohan'ny boky iray mamaky momba ny zanak'olombelona izay nibodo an'izao tontolo izao nandritra ny sento nataontsika teny amin'ny habakabaka. Angamba hieritreritra ilay zatovo fa gaga ...
Extraterrestrial, nataon'i Avi Loeb
Ny lohateny feno dia ny "Extraterrestrial: Humanity amin'ny famantarana voalohany ny fiainana manan-tsaina any ankoatry ny Tany" ary tsy maintsy vakiana indroa farafahakeliny mba handraisana ny maha-zava-dehibe izany fanambarana izany. Taorian'ny tantara an-jatony, sarimihetsika, zava-mahadomelina psychotropika ary zava-miafina ambony an'ny NASA, dia toa ...
Fandrahonana mahafaty indrindra, nataon'i Michael T. Osterholm
Ilay boky ara-paminaniana izay nampitandrina voalohany ny amin'ny krizy virus coronaavirus. Ity boky nosoratan'ny iray amin'ireo manam-pahaizana momba ny epidemiolojia malaza eran-tany ity dia niandrandra tsikelikely ny areti-mandringana izay mamely ny planeta. Ity fanontana nohavaozina ity dia misy prologue izay ahitana ny krizy ...
Matematika sy filokana, nataon'i John Haigh
Ny matematika ary, indrindra, ny statistika, dia roa amin'ireo lohahevitra nahatonga ny aretin'andoha lehibe indrindra tamin'ny mpianatra tamin'ny fotoana rehetra, fa fifehezana lehibe amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra izy ireo. Ny zanak'olombelona dia tsy karazana manokana fanomezana ho an'ny famakafakana ny lehibe ...